Maitiro Ekushanda Eakasiyana Mabhizinesi Mhando
Hofisi yehukama zviito zvepamutemo zvinofanirwa kuitwa nemutungamiriri weSangano, maofficial, kana vagovani kuitira kuchengetedza kuchengetedzwa kunopihwa nekuumbwa kweSangano. Aya ndiwo maitiro anokosha anochengetedza zvivakwa zvevatungamiriri veCorporate, maofficial, uye vagovana.
Iwo Ekutanga Masisitimu ndeaya:
Corporate Funds inofanirwa kuchengetwa yakaparadzana uye kunze kweMunhu Mari. Iyo yemubatanidzwa inofanirwa kunge iine yayo emabhengi maakaundi (kusanganisira kutarisa, mitsara yechikwereti, nezvimwewo). Kusachengeta mari idzi dzakaparadzaniswa, dzinozivikanwawo sekuti "kudzika," dzinogona kutungamira mukuwongorora uye zvinogona kuita mutoro wakakomba pachiitiko chekuwongorora ne IRS nekuiswa panjodzi kwehunhu hwako. Iyo yakanaka maitiro maitiro kusabatanidza mari.
misangano yeBhodi revatungamiriri 'inofanirwa kuitirwa kanokwana gore rega, kazhinji ichitevedza kumashure kwemisangano yeShareholder (inozivikanwawo se "Misangano Yakakosha"). Ese makumi mashanu anoti nyika inosungirwa musangano unoitwa kamwe chete pagore Iyi misangano yegore negore inofanira kushandiswa kubvumidza kutengeserana kunopinda neCorporate. Panzvimbo yekupinda nechero ipi yakapihwa Director, mvumo yakanyorwa inofanira kupihwa naiye Director (kungave fomu rekuregererwa mukushaikwa kwechiziviso chakakodzera, kana muchimiro chevhoti yeproxy yakapihwa ziviso chaiyo) yesarudzo dzese dzinoitwa pamisangano iyi.Misangano yeVagovani, inozivikanwawo se "Misangano Yakakosha" inogona kuitwa chero nguva. Munyori weSangano anoona nezvekupa ziviso yepamutemo yemisangano iyi, uye nekuchengetedza kuregererwa kunodiwa, proxies, maminetsi, nezvimwe.
Kambani Maminiti, kana "manotsi emisangano yeBhodi reDhairekita kana Misangano Yakakosha" akakosha uye ndizvo zviri pamutemo, zvinyorwa zviri pamutemo zvemisangano yakadaro.Maminetsi eCorporate anofanirwa kuchengetwa zvakateedzana nemusi muBhuku reMiniti, uye anogona kuve akakosha pfuma mukuchengetedzwa kwevatungamiriri veKambani ', maofficial' uye masheya evanogovana. Kuchengetedza kwakakodzera, kwakakodzera kwemaminetsi aya kwakakosha mukuzvidzivirira kubva kuongororo ne IRS uye kushandura zvirevo zvevatungamiriri.Vatungamiriri nemaCorporate Mahofisi dzimwe nguva vanotsvaga gweta repamutemo panguva yemisangano yegore, uye nhaurirano dzese panguva dzemasangano dzinoonekwa sehurukuro dzakakomberedzwa uye dzakachengetedzwa nedzidziso yepamutemo. YeGweta-Mutengi Ropafadzo. Nekudaro, maminetsi akatorwa eidzi hurukuro anotorwa sechikamu cheCorporate rekodhi uye nekudaro kutarisirwa kunofanirwa kutorwa, neMubatanidzwa weCorporate, kuti vaone kana kutaurirana uku kuchiitika nekuvadoma muMaminetsi eCorporate se "Kukurukurirana nenhengo dzeboka revatungamiriri." uye gweta repamutemo vakaita hurukuro ine kodzero-zviri pamutemo panguva ino ”pachinzvimbo chekucherechedza kutaurirana chaiko neshoko.
Zvibvumirano zvakanyorwa pane ese mashandisirwo anofanirwa kuitwa nekuchengetedzwa Zvese zviitiko zvinotora zvivakwa zvezvivakwa, zvikwereti (kungave zvemukati kana zvekunze), zvibvumirano zvevashandi, zvirongwa zvekubatsira, nezvimwewo zvinopinda neinomirira Sangano zvinofanirwa kunge zvakanyorwa. fomu risingaenderane kana risati rasvika rezvikwereti zvemukati kubva kune Mugovani kune iyo Sangano, semuenzaniso, zvinogona kutungamira ku IRS kudzoreredzwa kwekudzosera kwemukuru wechikwereti pachikwereti chakanzi sechikamu, pamwe nezvikwereti zvemitero zvakaenzana zvakaitwa neMugovani. mubhadharo wevakuru, zviwanikwa zvemidziyo, nezvimwewo zvive panguva yakakodzera uye zvakanyorwa zvakanaka mumaminitsi aya. Kukundikana kwemagwaro akakodzera uye akakodzera panguva izvi zvinogona kukonzera zvikwereti zvemitero kubva kuMutungamiri, Mahofisi, kana Vagovani venzvimbo nekuda kwe IRS "kugadzirisa patsva." Semuenzaniso, IRS inogona kusarudzira izvo zvavanofunga se "yakawandisa, isina magwaro ekuripwa kwemukuru" sechikamu chemubhadharo kumubatsiri, uye nekudaro kwete mutero unobvisirwa nekambani- izvi zvinotungamira mukuwedzera, kusabhadharwa zvikwereti zvemutero.
Hatigone kusimbisa zvakanyanya zvekuti kutadza kucherechedza nekushandisa izvi zvimiro zvinoshanda kudzikisira uye kudzikisira kudzivirirwa kunopihwa nekuumbwa kweSangano uye inobvumidza masangano ekunze (iyo IRS, vakweretesi, vanochemera / vamhan'ari, vangangoita vanopokana, zvichingodaro. ku "pwanya chifukidziro chekambani" uye kutarisa mukati mekushanda kwemukati uye midziyo yeSangano, maofficial, maDirector uye maShareya.
Mashandiro Ekushandira Makambani
Mitemo yakakosha yekushanda kwekambani inozivikanwa se "Corporate Formalities," kana "Mashandiro Ekushanda." Mitemo iyi yakagadzirirwa kuona kuti yakasarudzika yepamutemo chikamu chinzvimbo chakapihwa mubatanidzwa chinochengetwa, uye kucherechedzwa kwemitemo kunoona kuti ese mabhenefiti anoenderana nekuumbwa kwesangano harikanganiswa. Aya maratidziro anofanirwa kucherechedzwa nevakuru vese, nhengo, uye madhairekitori ekambani, iine mamwe mabasa nekuitwa kunopihwa sezvakakodzera. Kukundikana kucherechedza zviitwa izvi kunogona kutungamira ku "kuboorwa kwechidzitiro chekambani" nevekunze mutemo, mutero, kana mamwe masangano.
Sangano rinofanira kuchengetedza nhoroondo chaiyo yemisangano yese nebhodhi kana misangano yakasarudzika inoitwa nevanogovana. Aya maakaunzi, kana manotsi, anozivikanwa se "maminetsi," uye anochengetwa muyekubatanidzwa "maminetsi bhuku." Iko kuchengetedza uye kurongeka kwemaminetsi ibasa rakananga reMubatanidzwa munyori. Izvo zvakakosha kuti maminetsi akakwana uye akarurama achengetwe neMunyori, sezvo maminetsi aya anogona kuratidza kukosha mukuyedza kuratidza iyo yakasarudzika yepamutemo chimiro chekambani neanodzora kana mamwe masangano.
Pachave pasina kubvumirana kwemari yemubatanidzwa. Izvi zvinoreva kuti zvinhu zvakavanzika zvemukuru, mukuru, kana wekugovana mubatanidzwa hazvifanirwe kumbo "sanganiswa" nekambani kana mari yemubatanidzwa. Kubatana kunogona kuitika kuburikidza nezviito zvakapusa sekubhadhara ma invoice ekambani kubva kuaccount yekuzviongorora, kana zvakapesana, kubhadhara wega mota chikwereti kubva kukambani chebhuku. Aya marudzi ezviito anoshandira kudzikamisa rakaparadzaniswa rezvemutemo chimiro chekambani, uye zvinogona kutungamira kune yakanangana nemhosva yako pachako kana kurasikirwa kweako zvinhu muchiitiko chematare, mutero, kana kuunganidzwa kwenyaya.
Iyo Corporate Board yeVatungamiriri inofanira kusangana kanokwana kamwe pagore. Iyi misangano inodikanwa neese makumi mashanu matunhu, uye ndiwo musangano wakarongeka panguva iyo sarudzo dzakakosha dzemakambani dzinoitwa, senge kutenga kukuru, kubatanidzwa, zvibvumirano zvekutengeserana kana zvibvumirano zvechibvumirano nemamwe masangano, nezvimwewo, zvinowanzoitika panguva yemisangano iyi. kuti sarudzo dzine chekuita nehutungamiriri hwekambani dzinoitwa, uye panogamuchirwa zvinzvimbo zvevakuru, zvinoshandurwa, uye kunyangwe sachigaro kana CEO anogadzwa. Kuenda kunofanirwa nevatungamiriri vese, kunze kwekunge mvumo yakanyorwa yekupihwa vhoti yemvumo yakapihwa kune imwe nhengo yebhodhi nenhengo isipo.
Zvese zvibvumirano zvebvumirano zvakapinda nekambani, padanho rekambani, zvinofanirwa kurangarirwa zvakanyorwa, nemvumo yakajeka yeBhodi revatungamiriri. Izvi zvinosanganisira zvese zvibvumirano zvinosunga zvemari (zvikwereti, mitsara yechikwereti, nezvimwewo), kuwanikwa (zvivakwa, zvimwe zvikwata zvemakambani, michina yemidziyo, nezvimwewo), nebasa (nemaofficial, nezvimwewo). Kukundikana kuita zvakanaka mamwe masisitimu kana vangangove vashandi kunogona kukonzera mutero wakakura kana zvikwereti zvemari, uye muzviitiko zvakakomba, zvinogona kukanganisa mamiriro epamutemo epamutemo yekambani kana paine chirevo chekuti mukuru kana nhengo yeBhodi aishandisa mubatanidzwa kana midziyo yayo sekuchinja kwake.
Kuitwa uye chimiro cheaya maratidziro zvichazosiyana nemhando yekambani yakaumbwa, asi chakakosha, chimiro chakakosha chakafanana. Aya maratidziro akakosha chikamu chekushandira pamwe uye anofanirwa kutevedzwa senge inyaya yechokwadi. Kukundikana kutevedzera maitiro emakambani kunowanzo kutungamira mukushomeka kwekuchengetedzwa kwemidziyo, uye kuchengetedzwa kwechikwereti kushomeka, kunopihwa nekuumbwa kwesangano, pamwe nemhedzisiro yakaenzana.
Yakarongeka Sangano Rakaumbwa
Maofficial Corporate maofficial anowanzo kuve neMutungamiriri, Mutevedzeri wemutungamiri, mubati wehomwe uye munyori. Sangano rinogona kusarudza kuve nenzvimbo dzevakuru, asi aya ndiwo akajairwa, akanakisa maitiro nzvimbo. Matunhu mazhinji anotendera munhu mumwe chete kubata ese mahofisi, asi iyi inogona kunge isiri nzira yakanaka yekuita. Chiremera nemitoro yemukuru wega wega zvakatsanangurwa mumitemo yekambani.
Mutungamiri - Mutungamiri wesangano anowanzo sarudzwa neBhodi revatungamiriri uye ane basa rekuita mirairo yakapihwa neBhodi revatungamiriri. Mutungamiri ndiye mukuru wekambani.
Iye Treasurer - Iye Treasurer ndiye anoona nezve manejimendi yemakambani ese mari, maakaundi ebhengi, mitsetse yechikwereti, uye yekurekodha zvese zvemakambani zviitiko zvemari. Nepo mazhinji emabasa aya achizvitungamira, Treasurer anotora nhungamiro yake kubva kuBhodi revatungamiriri.
Iye Secretary - The Secretary anoita basa rakakosha mukuti iye kana iye ndiye ane basa rekuchengetedza uye kuchengetedza zvinyorwa zvemakambani. Izvi zvinosanganisira, asi hazvingogumira kune, magwaro ekuumba, maminetsi emakambani, uye chero bhizinesi rekutengeserana kana zvibvumirano zvakanyorwa zvakapinda kana pachinzvimbo chekambani.
Bhodhi revatungamiriri iboka rinodzora rekambani rinotungamira zvisungo zvakakosha uye zviitwa zvikuru zvesangano. Iwo madhairekitori anowanzo sarudza mutungamiri uye vosiya mashandiro akajairika uye bhizinesi rezuva nezuva kumutungamiriri uye vamwe vatungamiriri vari pasi pevashandirwi, asi kazhinji zvinoda kubvunzana zvisati zvaitwa sarudzo kana zvibvumirano.
Vashandi (vanonziwo vatengesi) ndivo varidzi vekambani. Saka nekudaro, bhodhi revatungamiriri uye maofficial emakambani vane chikwereti chekusimbisa kune vanozogovana kuti vaite izvo zvinovafarira zvakanyanya seboka. Kodzero dzevashandi chaidzo dzakatsanangurwa mumitemo yekambani uye mumutemo wenyika, uye mitemo iyi inosiyana nyika nenyika. Kunyangwe hazvo mabasa uye maitiro ekuzivisa achisiyana kubva kumatunhu nenyika, vanogovana vanowanzovhotera purezidhendi, kusarudzwa kwebhodhi revatungamiriri uye chero shanduko huru mukuumbwa kana musangano wesangano.
Mugovanisi kana muridzi wechitoro mukambani anogona kuve munhu kana imwe kambani kana mubatanidzwa unoonekwa se “muridzi” wekambani iripo nekuti zviri pamutemo ine chikamu chimwe chete mudura rekambani. Kazhinji kubata kodzero yevhoti imwe chete pamugove pazvinhu zvakaita sesarudzo kubhodhi revatungamiriri, kodzero yekugovana mukugovera mari yekambani, kodzero yekutenga migove mitsva yakapihwa nekambani, uye kodzero yezvinhu zvekambani panguva kubviswa kwekambani, iye munhu kana vanhu vane ruzhinji rwechitoro vanogona kuvhota mubhodhi rinokodzera zvido zvavo uye kumhanyisa kambani. Imwe pfungwa yakakosha yekucherechedza ndeyekuti kunyangwe vatungamiriri nevatungamiriri vekambani vakasungirwa nemabasa ekuzvipira kuita zvakanakira ivo vagovana, ivo vagovani pachavo kazhinji havana mabasa akadaro kune mumwe nemumwe.
A Corporate Officer munhu ane chinzvimbo chepamusoro mubato rakapihwa iro rinopihwa zita rinoratidza chinzvimbo charo mukati mekambani. Nepo mubatanidzwa ungave uine nzvimbo zhinji pasi pechiono chawo, chete vanhu vane zvigaro zvepamusoro ndivo vanoonekwa se "vatariri vemakambani" (kana vatungamiriri).
Mazhinji emakambani anosanganisira anotevera anotevera Officer kana Executive chinzvimbo.
Zvimwe zvinowanzozivikanwa mahofisi zvinoti:
Chief Anoshanda Officer (COO)
Chief Information Officer (CIO) uye (Fractional CIO)
Chief Ruzivo Officer (CKO)
Nhengo dzeDare revatungamiriri dzinogona zvakare kuve maofficial, asi izvi hazvimanikidzi kana hazvo kudaro - mazita anogona kunge ari chero ivo varidzi vemasheya zvavanoda kuti vave, kunyangwe izvi zvichifanira kuve zvinotsanangurwa mumitemo yekambani. Kupfuurirazve, kazhinji nzvimbo nzvimbo dzinogona kusanganiswa nemunhu mumwe akabata zvinopfuura zita rimwe, uye nenzvimbo dzakasiyana dzakabata zvisungo zvakasiyana zvekutaurisa (semuenzaniso, mune dzimwe nguva, Mutungamiriri anogona kukumbirwa kuti amhan'arira kuna CEO, nepo mune mamwe masangano, CEO anogona kubvunzwa kuti vamhan'are kuMutungamiri). Kana ivo vanogona kutove nevanhu vakawandisa vane zita rakafanana (izvo zvinowanzoitika nemusoro weVice President).
Sarudzo dzemubatanidzwa dzakanyorwa zvisarudzo zvinoshanda kuratidza hurongwa, muripo, uye mabhenefiti kune avo vanogoverana pamwe nevatungamiriri vekambani. Kunyangwe ivo vasingadiwe pamabatiro ese emakambani, iri tsika yakanakisa yekurekodha zvisarudzo zvikuru zvesangano nenzira yezvisarudzo zvakanyorwa. Izvi zvinosimbisa makambani nhovo yepamutemo nekupa humbowo hwakasimba hwekuti chero zviito zvakatorwa zvakamiririrwa nekambani kwete panzvimbo yevaridzi kana maofficial.
Mitemo yekambani, kana iyo "mitemo" yekambani uye vagovani vayo, inonyorwa nevasunguri vekambani kana vatungamiriri pasi pesimba reCharter kana Zvinyorwa zveInorporation. Mitemo inowirirana zvakasiyana kubva pasangano kuenda pasangano, asi kazhinji inovhara misoro senge masarudzirwo evatungamiriri, misangano yevatungamiriri nevane masheya inoitiswa, uye nemakurukota achavei uye nerondedzero yemabasa avo. Vanogona kazhinji kugadziridzwa nesangano reBhodi revatungamiriri
Hatigone kusimbisa zvakanyanya zvekuti kutadza kucherechedza nekushandisa chero eaya maitiro kunoshanda kudzikisira nekudzora dziviriro dzinopihwa nekuumbwa kweSangano uye ichabvumidza masangano ekunze (iyo IRS, vakweretesi, vanochemera / vamhan'ari, vangangoita vanopokana, zvichingodaro. .) ku "pwanya chifukidziro chekambani" uye kutarisa mukati mekushanda kwemukati uye midziyo yeSangano, maofficial, maDirector uye maShareya.
Yakatemerwa Chikwereti Kambani Inoshanda Zvirongwa
Zvikwereti Zvikwereti Makambani ari kuramba achiwedzera kufarirwa sekambani yakanakisa yemakambani ehurongwa yekuita bhizinesi, nechikonzero chakanaka kwazvo. Ivo vanopa kusingachinjiki kuchinjika zvine chekuita nekutungamira nekushanda, dziviriro yakanakisa kubva pachisungo, uye ivo vanopa yakadzama mitero mabhenefiti mune yavo nzira yekupfuura-kuburikidza nemutero. Ikoko kunenge kunoratidzika kuve nekukakavadzana nedzimwe nyika kukwezva makambani kazhinji, uye LLC kunyanya, kwavari nenzira yezviito zvebhizimisi-zvine ushamwari uye kufamba kwemitemo. Kunyangwe zvakadaro, kune mamwe matanho anoshanda uye ehurongwa, dzimwe nguva anozivikanwa se "LLC zvimiro," izvo zvinofanirwa kutorwa uye kutevedzwa kuitira kuti nhengo dzinge dzichifarira ese mashoma chikwereti uye mutero mabhenefiti akapihwa iyo LLC.
Kuboora iyo LLC Chidzitiro
"Kubaya chifukidziro chekambani" ndiyo nzira dzakaenzana dzematare dzinoshandiswa kushora chimiro chekambani, uye izvi zvinogona kuturikira mukuboora kwe "LLC chifukidziro." Kana mubatanidzwa ukawanikwa usiri kushanda mukucherechedza zviri pamutemo, muridzi ari kushandisa kudzora kwakanyanya, mari iri kushandiswa zvisirizvo kuti ibatsire muridzi, kana kana iri kambani ichionekwa kuti iri kuitwa nenzira yekukonzeresa. kukuvadza kune chimwe chinhu, matare anogona kubaya chifukidziro chemubatanidzwa uye kuita kuti muridzi (ivo) ave nemhosva pachikwereti kana zvisungo zvekambani. Izvo zvakafanana zvinogona kuve zvechokwadi, kunyangwe zvichibvumidzwa kusvika padiki padiki, yeiyo LLC. Kana nhengo ikaita kutonga kwakanyanyisa pamusoro pesangano, kana iyo iri mukutonga ikaita zvisina kufanira mukuita kwekutonga pamusoro pesangano; uye kuita kwakashata uku kunokonzeresa kuti rimwe sangano rinyurwe mushonga wakakwana mudare redzimhosva kana bhizinesi rekutengeserana, mamwe matare anogona "kuboora chifukidziro che LLC" uye oita nhengo kana nhengo inotungamira kuve nechikwereti chakanangana kana chisungo.
Pachivanhu, matare akatarisa zvinhu zvakawanda kuona kuti nhengo inodzora / mugovani anoita zviito zvisizvo. Chikuru pakati pezvinhu izvi kungave kushomeka kwechibvumirano chekushanda, kana chisina kunyorwa. Zvakare, kutadza kuchengetedza zvakakwana marekodhi ekutenga, kutengeserana kwebhizinesi, uye mune dzimwe nyika, maminetsi emisangano anogona kutungamira dare kuti rizvidze chinzvimbo uye rigoita kuti nhengo iri kutonga ive nemhosva.
Nepo iyo mitemo yekutarisa zviitiko zvekambani isiri yakaoma seI LLC, zviri pachena kuti pachine zvimwe zvakafanana nezvezviitwa zvinofanirwa kucherechedzwa. Kuva nechinyorwa chakanyorwa-chakanyatsoshanda panzvimbo chinofanira kuve pachena parizvino, asi kune vamwe vaviri. Izvo zvakakosha (asi kwete zvimiro zvega zvega) zvakanyorwa pazasi.
Kuve nechakanyorwa chakanyorerana Chibvumirano chekushanda munzvimbo, iine mabasa akasanotsanangurwa enhengo, akanyatsorongedzwa nzira dzekugovera, uye mashandiro nemitero.
Zvinyorwa zvakakwana zvekushambadzira kwese uye kuita bhizinesi, pamwe nemaminetsi akanyorwa nemazvo emisangano (nyika imwechete, Tennessee, inoda musangano wepagore wemitezo). Rondedzero yenhengo, yapfuura neyazvino, zvinyorwa zvesangano, mutero unodzosa kwemakore matatu apfuura, zvirevo zvebhangi, zvisarudzo zvinobvumidza zviitiko izvo, kungave nemutemo kana pasi pemitemo yechibvumirano chekushanda, zvinoda vhoti yenhengo, nezvimwe. mienzaniso yese yemhando dzemarekodhi nezvibvumirano zvakanyorwa zvinofanirwa kuchengetedzwa nemazvo neI LLC
Inokwana capitalization yekambani uye nekuchengeta yakakodzera yekushandisa capital
Aya ndeamashoma, kunyange akakosha, mazano ehurongwa hunofanira kucherechedzwa. Zvimwe zviito, kana kushomeka kwazvo, izvo zvinogona kutungamira kubaya kwevhavha yeV LLC inosanganisira:
Zviito zvisina kuvharwa muChipatimendi Chekushandisa cheI LLC - izvi zvakafanana nekusaremekedza tsika dzeV LLC. Kunyangwe iyo LLC iri isingadiwe kuti icherechedze maitiro nenzira imwechete iyo mubatanidzwa, zviito zvayo zvinofanirwa kutungamirwa zvizere nechibvumirano chekushanda, uye chibvumirano ichi chinotorwa mukufungwa nematare nemasimba emitero kana danho rikaitwa mashandiro eI LLC.
Kushomeka kana kukwana capitalisation ndiko kumwe kushomeka kwakakosha kunoongororwa nedare kana mutero pakutarisa chinangwa cheiyo LLC nenhengo yaro uye zvinowanzo konzera zvakanyanya mukufunga kwavo kubaya chifukidziro. Izvo zvakakosha kuti iyo LLC inyatso kupihwa capitalism uye kubhadharwa mari, uye kuti nhengo dzichengetedze mari nenzira kwayo kuti dziite bhizimusi nemazvo. Kubhadharisa zvinhu zvakawandisa kana capital uye kusiya zvishoma muhomwe kugutsa vakweretesi kana mashandiro ekambani zvinogona kutungamira mukubaya kwevhairi.
Kubatanidzwa kwemari izano rakaipa mune chero chimiro chekambani kana LLC. Chero pfungwa yekubatana kwemari kana maaccount ingangotungamira kune "shanduko-yega" kumisikidzwa nematare kana bhodhi rinotonga mutero uye inotungamira zvakare kuvhara chifukidzo - nokudaro kuisa pangozi pfuma yako nekutorera nhengo mvumo uye kuchengetedzwa kwemidziyo. Iyo yakanaka-tsika chiito chekuita chokwadi chekuti akapatsanurwa maakaunzi anochengetwa uye anotariswa.
Huwandu hwesarudzo hunoratidzwa nenhengo hunofanirwa kuverengerwa kuona kuti zviito zvese zvinoonekwa sezvakanyanya kufarira iyo LLC kana bhizinesi. Yako yega ajenda inofanirwa kuuya yechipiri kune iyo LLC seyakazara, kuti zvisazofungidzirwe kuti yakagadzirirwa chirongwa chekutaura chega kwete chinangwa chebhizinesi.
Iyo LLC haifanire kubatwa seakawedzeredzwa nhoroondo yevaridzi vayo kana nhengo. Matare nematare emitemo emitero anogara achiongorora mashandisirwo emari uye mashandiro eI LLC kuona kuti ibhizimusi rinoshanda here kana inzvimbo yakazvimiririra yemubhadharo yevaridzi vayo kana nhengo. Kana ichionekwa senzvimbo yakazvimiririra yemubhadharo, chifukidziro chinogona kuboorwa uye panogona kuve nemitero nemitero yakanangana nemuridzi kana nhengo pachayo.
Iyo LLC inofanirwa kubhadhara uye kuvimbisa yayo pachayo zvikwereti, kunze kwekunge zvanyatsotsanangurwa muchibvumirano chekushanda kwezvimwe zvinodiwa zvezvinhu zvakadai sekurenda kana kukweretesa chivakwa chaicho, nezvimwe. Dzimwe nguva, kana muridzi kana nhengo inogara ichivimbisa kana kubhadhara zvikwereti, iye yakaratidzirwa kuita seanoshandura ego yeiyo LLC uye nekudaro ichaita kuti iyo LLC irasikirwe nechero chimiro chebato rakasiyana. Varidzi havafanirwe kubhadhara kana kuvimbisa zvikwereti zveavo maI LLC kunze kwekunge zvanyatsotsanangurwa muchibvumirano chekushanda chezvinangwa zvakatarwa.
Saka kunyangwe iyo "yakarongeka" seti yemitemo isiri chinhu chinodomwa nechero nyika kune iyo LLC, murume ane hanya uye akashama bhizinesi murume kana nhengo ye LLC anonzwisisa kuti kune LLC tsika dzinofanirwa kutevedzwa nekutevedzwa kuti unakidzwe zvizere nezvakanaka inobhadharwa neI LLC.
Nhengo ye LLC inogona kufananidzwa nemugovani kana muridzi wekambani muboka, asi aine misiyano yakati siyanei. Mukuru pakati peiyi misiyano ndeyekuti nhengo inogona kupihwa kodzero dzekuvhota mu LLC zvichibva muzana remari yavakaisa muI LLC. Iyi gadziriro inofanirwa kutsanangurwa muChipatimendi Chekushanda (chakafanana ne "madhiri" mune mubatanidzwa), pamwe nechero mimwe mirawo kana zvibvumirano zvinokanganisa nhengo mune iyo LLC. Chibvumirano chekushanda ichi chinofanirwa kuve chiripo nguva isati yasvika, kana nguva pfupi mushure mekunyorwa kweZvinyorwa zveSangano.
Nyika zhinji dzinobvumidza kugadzirwa kweye-nhengo-nhengo maAdvs, nepo mamwe matunhu achida maviri kana anopfuura nhengo, saka izvi zvinofanirwa kutariswa pakuumba iyo LLC. Izvo zvakare zvakakosha kuti uzive kuti iyo IRS inogona kunyorera akasiyana mutero zvikwereti kune iyo LLC ine nhengo imwechete chete (yakabhadharwa sekambani kana isina kuremekedzwa mubato wemitero) pane zvazvinoita kune iyo LLC ine inopfuura imwe nhengo (yakabhadharwa semubatanidzwa nekusarudzika).
Kazhinji, nhengo dzemitezo dzinogona kutengeswa chete pakubvumidzwa kwenhengo dzakabata ruzhinji mukufarira, kunze kwekunge zvataurwa neimwe zvinyorwa zvesangano kana chibvumirano chekushanda.
Kumwe kufunga kwakakosha ndekwekuti mitezo ine mutoro wakanangana nemari yese yeI LLC, muhuwandu hwakaenzana, zvisinei nekuti kugoverwa kwemari kwakaitwa here. Izvi zvese kubatsirwa kwekupfuura-kuburikidza nemutero kurapwa, uye nyaya kana paine kusawirirana pakati penhengo.
Kugadzirisa iyo LLC
Nepo kuumbwa uye chimiro cheI LLC chingave chinopa mubayiro kunhengo dzayo, mashandiro akanaka uye manejimendi eiyo LLC haina njodzi uye inoda kufungisisa. Hazvina kumbobvira zvanyanya kufunga nezve manejimendi manyorerwo eiyo LLC, uye chimiro uye zvinangwa zvehunyanzvi zvinofanirwa kuratidzwa muchibvumirano chekushanda uye chimiro cheiyo LLC. Sezvo ichichinjika uye yakarongeka ichiumbwa senge iyo LLC iri, zvakakosha kuti kusarudzwa kwezvakakosha manejimendi zvinongedzo, kupihwa simba kwevamwe nhengo kunotsanangurwa, uye kugoverwa kwemari uye zvinangwa zvemitero zvitaurwe, nekukurumidza sezvazvinogona. Uye zvakare, hanya inofanirwa kutorwa neManaging Nhengo kuona kuti kuvimbika kwenzvimbo yakasarudzika yeiyo LLC inochengetedzwa, nekudaro kuchengetedza nzvimbo yayo yemutero uye kudzivirirwa kwechikwereti chakashomeka kunopihwa nhengo dzayo. Iyo LLC maneja anogona kushandisa iyo kambani kushanda chero bhizimusi chero ripi zvaro kubva kune yakazvimiririra equity boka kuenda kuchitoro chepawn.
Zvizhinji nenzira imwecheteyo iyo maCorporation anogona kuiswa pasi pechifukidziro chemakambani nemasangano ekunze kana mapato anopikisa mudare, iyo LLC inogona kutorerwa kuchengetedzwa kwekambani kana chinzvimbo cheI LLC chikaiswa mungozi nekuda kwekushandisa zvisirizvo kana kushandisa zvisirizvo mari dzayo kana zvinhu. Maitiro ekurasikirwa nedziviriro aya akafanana chaizvo neayo akajairwa Corporation kurasikirwa nechifukidzo. Kana, semuenzaniso, dare redzimhosva rinoona sekuti nhengo dzakaita nenzira yekuti mari yekambani yaibatwa seyavo, kana kana iyo LLC yaive de-facto nhoo yekutiza mutero, kana kana fomu rekambani rakashungurudzwa kana vasina hanya zvachose nenhengo, ipapo vaizotorwa sevakarasikirwa nechinzvimbo chavo cheVADZIDZISI uye vanozoiswa pakuvharwa kweV LLC. Pamusoro pezvo, dare rinogona zvakare kukumbira dzidziso kana ichinzwa kuti iyo LLC yaitarisirwa kana kutongwa nenzira yekuti yaishandiswa kuitira kukuvadza, kubiridzira, kana kusaruramisira kune munhu wekunze, boka, kana sangano.
Ndiwo murairidzi weMenenja wekutanga kuona kuti hapana kana chimwe chezvinhu izvi chinoitika chero panguva yekuumbwa kana kushanda kweiyo LLC. Kunyangwe pasina "Corporate Formalities" akakodzera anoshanda kune iyo LLC, matare zvakadaro anotarisira kuti LLC ichengetedzwe mukati meparamende ye "fomu yemubatanidzwa," iine zvimwe zvivakwa uye nzwisiso.
Pane akakosha mapoinzi anofanirwa kutariswa kuitira kunyatso maneja iyo LLC:
Kuita Chibvumirano Chekushanda uye kuchengetedza huchokwadi hwayo. Ichi ndicho chibvumirano chinotonga mashandiro uye manejimendi yeiyo LLC, uye ndicho chinhu chepedyo kuCorporate Fomati inosangana neiyo LLC. Ino inzvimbo iyo kupi kwese kugovera, mutero, uye zvinangwa zveI LLC zvinofanirwa kutsanangurwa zvakajeka kuitira kuti pasave nemubvunzo wechinangwa kune yega yeaya mapoinzi. Ino zvakare inzvimbo panotsanangurwa chero ropafadzo dzakakosha kunhengo dzakakosha.
Ita shuwa kuti kune yakakwana capitalization yekuumbwa, kushanda, uye kugadzirisa kweiyo LLC. Iyi ndiyo imwe nzvimbo yeku manejimendi inoonekwa iri padyo nekutongwa nedare pese panogununurwa chinzvimbo cheV LLC. Mari isina kukwana inogona kubira kubiridzira kudare uye inogona kutungamira kubaya kwevhavha yeV LLC. Iri ibasa reManaging Rinoshanda uye rairo yekuona kuti mari yeV LLC yakachengetedzwa nemazvo, uye kuti hapana kushandiswa zvisirizvo kwemari kana kuwandisa kana kusakosha kwemidziyo nenhengo. Kushandiswa zvisina kukodzera kwemari kana kusiya mari yakakwana yekushandisa muhomwe inzira yemoto yekukwezva kune vasingateereri mutemo kana kutariswa nedare uye kutungamira kuboora chifukidziro.
Nhengo Inotungamira inofanirwa kuona kuti hapana zvachose kuunganidzwa kwemari. Izvi zvinoreva kuti munzira ipi neipi mari yeV LLC haifanirwe kushandiswa pazvinangwa zvemunhu kana mukana nenhengo, kana nhengo dzinofanirwa kuve nemhosva yekubhadharisa kana vimbiso yechikwereti cheV LLC kana chisungo chemari. Chero ipi nzira yemashandisirwo emari yemubatanidzwa mari kana zvinhu inonyatso kutungamira kune kuchinjika-kududziro nedare kana vamiririri vanodzora izvo zvinongotungamira mukurasikirwa kweiyo LLC chinzvimbo uye zvese zvidziviriro zvinopihwa nemamiriro akadaro.
Nhengo dzese dzinofanirwa kutevedzera zvirevo zvakatsanangurwa neChipangano Chekushanda, uye vanzwisise kuti zviito zvese zvepamutemo vakamirira LLC zvinofanirwa kushandiswa pachinhanho che "mune zvakanakira iyo LLC" kuona kuti hapana ajenda dzakaunzwa pa mari yehutano hweI LLC. Chero zviito zvinopesana zvinogona zvakare kutungamira kuchinjiso-kugadziriswa nedare uye zvinoguma zvakare mukuboora kweiyo LLC chifukidziro.
Mutero ndeimwe nzvimbo umo manejimendi anoshanda anogona kutungamira mukubudirira kutora mukana wezvese mutero mabhenefiti akapihwa nhengo. Kudzivirirwa kwemitero yakawandisa ndicho chimwe chezvikonzero zvakakosha kuti makambani asarudze kuisa seMa LLC, uye zvinonyanya kukosha kuti mabhenefiti aya anochengetedzwa kuburikidza neChipangano Chekushanda chinoshanda uye nemanejimendi manejimendi. Zviri mukufarira kwenhengo yega yega kuti aya mabhenefiti anochengetedzwa kuburikidza neanoshanda uye anoshanda manejimendi.
Kuva nehurongwa hwehutariri hwakakodzera, uye kunyora chibvumirano chakakwana uye chinoshanda, chichaenda kure kure kuona budiriro yeI LLC, uye kusarudza inhengo-inoteera Inotungamira Nhengo ndiyo nzvimbo yakanakisa yekutanga.
Kusatungamira Kugadzirisa iyo LLC
Kuti tienzanisire kuti nyaya idzi dzinogona sei kudzikisira kana kubvisa chengetedzo kubva kuzvikwereti zvinopihwa neI LLC, ngationgororei mienzaniso miviri:
LLC Management Muenzaniso - Commingling Funds John anobvuma kudyara neInvest LLC, iyo Simon ari ega nhengo. Pasi pechibvumirano chekudyara, IInvest LLC inogadza chimiro chekudyara nemazuva makumi mana nemashanu, umo John achizotora mari yake, pamwe ne45% bhonasi.Simon, senhengo yega ye IInvest, haina kunyorwa zvakanaka. Simon anotora mari yekutora zvikwereti kumba kwake kuitira kuti abhadhare mari yeVSL pane kungokweretesa mari kune iyo LLC uye nekupa tsamba yekuvimbisa. Iye zvakare anoburitsa LLC cheki yemari yake yemubhadharo uye anobhadharira iyo LLC mashandisiro emari kubva kuaccount yake yega pasina kuzvibhadharira iye kana kuve nepepa yechivimbiso kubva kune iyo LLC yekuzvibhadharira iye amene mune ramangwana. Pakupera kwenguva, John anoda mari yake yekudyara plus iyo 25% bhonasi yakatenderwa. Simon haakwanise kubhadhara capital uye mafaera ekudzivirira kubhuroka kweI LLC.Muchiitiko chinotevera chedare, John angangobudirira kubaya chifukidziro chemubatanidzwa uye anogona kutanga kudzoreredza kurasikirwa kwake kubva kuzvinhu zvaSimon, zvinosanganisira imba yake, mari, maakaundi kumashure, mota, nezvimwe.
LLC Management Muenzaniso - Dhizaini Kudzivirirwa Tony ndiye chete nhengo yeSpeedyService LLC, yemuno package package yekuendesa. SpeedyService LLC's balance sheet inoratidza mambure anokosha emadhora zviuru makumi mashanu. Zvisingatarisirwe, Better Delivery Corp. inovhura mikova yayo padyo neDelivery LLC iyo inokonzeresa musika weSpeedyService LLC masevhisi kuderera. Mambure akakosha eSpeedyService anodonha zvakanyanya. Tony haadi kuwedzera mamwe capital, uye kambani nekukurumidza yabuda mubhizinesi. Jack anouya nesutu kubaya LLC chifukidzo cheSpeedyService LLC, pasi pechiitiko ichi, Jack anogona kuyedza kubaya SpeedyService LLC chifukidziro kuti asvike kune zvake zvinhu zvaTony. kana kumisikidzwa kwemakambani, inoonekwa semushonga unorwadza nematare mazhinji, kunyanya muzviitiko apo muridzi ari munhu zvinopesana nerimwe bhizinesi. Saizvozvowo, dare rinongozongoitika mune zvisingawanzoitika mamiriro, uye mushure mekufungisisa kwakawanda, rinotendeukira kune uyu mushonga. Izvo zvakakoshawo kuti uzive kuti zviri pamutemo zviri pamutemo kuumba iyo LLC kunzvenga wega chikwereti. Nomuzvarirwo, chii chichafumura varidzi vacho chiri kushandisa ino pekugara yemari kuita mhosva.
Nhengo dze LLC dzinogona kubata nenjodzi idzi nekuona kuti vane chirongwa chakazara uye chakakodzera manejimendi munzvimbo yechisungo chakanyorwa uye chinotaura chibvumirano chekushanda. Ivo vanofanirwa kuona kuti bhizimusi rako pachako uye zvemari zviitiko zvinochengetwa zvakaparadzana kubva kune iyo LLC, kuti zviwanikwa zvemunhu nemari zvichengetedzwe zvakasiyana kubva kune iyo LLC, uye kuti panogara paine capitalization yakakwana kuitira kuona kushanda kwakanaka kwebhizinesi.
Chikamu chega chega chemuridzi chinofanirwa kujekeswa muchibvumirano chekushanda, pamwe nekodzero dzipi dzipi dzekuwedzera kana zviremera zvakapihwa chero muridzi. Pundutso uye kugoverwa kwemabhonasi kunofanirwawo kunyatsotsanangurwa muchibvumirano chekushanda, pamwe nedhora renhengo kana muhoro. Kana paine vasiri-nhengo vashandi veiyo LLC, avo mabasa, kodzero, uye mabasa anofanirwawo kuve chikamu chechibvumirano chekushanda uye zvakanyatso nyorwa mukati.
Kushanda iyo LLC
Iwe waumba yako LLC uye wakagadzirira kukohwa iyo yakawanda mutero, yakatemerwa chikwereti, uye asset dziviriro mabhenefiti inopihwa nesangano. Ndezvipi zvinhu zvekutarisa nekutarisa kunze kuti umhanye zvakanaka yako LLC? Inofanira kufambiswa sei? Unofanira kutanga kupi? Nekuda kwekuchinjika mumastaira eku manejimendi uye mutero mamiriro ekurapa anowanikwa kune maAdvs, pane zvakakosha sarudzo dzekuita izvo zvinotakura kunyatsofungisisa. Izvo zvakakosha kuti kambani yako isimbiswe uye ishandiswe nemazvo kuitira kuti iwe ugone kutora mukana weiyo yekuchengetedza dziviriro, kudzivirirwa kwematare uye mutero mabhenefiti izvo zvinobatsira maficha eiyo LLC.
Pane zvakawanda zvakanyorwa nezve izvi mabhenefiti uye zveiyo LLC sefomati bhizinesi kune mudiki kusvika pakati-saizi bhizinesi muridzi. LLCs inogona zvirokwazvo kuve inobatsira bhizinesi dhizaini nekuti dzakasiyana sarudzo zvine chekuita nemashandisirwo anoitwa kambani uye mutero zvinogona kukwana akati wandei emhando dzakasiyana dzemabhizinesi. Mumwe anofanirwa kutsika nokungwarira, zvisinei, sezvo sarudzo yako yekushanda uye kurapwa mutero kunogona kukanganiswa nenzira yekushandira iyo kambani yako uye izvi ndizvo chaizvo zvinoita matare uye / kana IRS ichaongorora mabatiro ekambani yako muchiitiko yematareji kana yemitero mibvunzo.
Uchishandisa yako LLC seS Corporation
Nguva zhinji nhengo dzinosarudza kubhadharisa mutero uye kushanda seS mubatanidzwa nekuti zvakasiyana neyakajairika "C" mubatanidzwa neayo mbiri mutero nyaya, uye kuratidzwa kune chinzvimbo chemubatanidzwa, mune iyo LLC purofiti uye kurasikirwa zvinogona kupfuura zvakanangana ne muridzi wemunhu mari yemutero inodzoka nepo midziyo yemuridzi ichidzivirirwa kubva pachikwereti. Aya mabhenefiti aimbove akasarudzika ega kune chero mubatanidzwa, kana mubatanidzwa, asi zvisati zvamboitika zvakabatanidzwa pasi peimwe modhi. Iyi dziviriro, zvisinei, haina muganho- kana iyo LLC isina kurongeka nenzira kwayo kana chibvumirano chekushanda chisina kunyorwa zvakanyatso chengetedzwa zvisina kukwana kana mutauro, nhengo dze LLC dzinogona kuzviwana dzatarisana nematare edzimhosva pasina zvidziviriro zvevanhu, kana vanogona kuzviwana vachirapwa sevasiri -paradzanisa chinzvimbo kana chinja-ego neiyo IRS ine yakaenzana mutero misungo. Izvo zvakakosha zvakakosha kuti iyo LLC iratidzwe zvinoenderana nemaitiro eiyo S mubatanidzwa kana iri iri chokwadi kuitirwa saizvozvo.
Vagovani vemakambani pane dzimwe nguva vanga vari pasi pedzidziso ye "kuboora chifukidziro chemubatanidzwa" pazvinhu zvakaita sekusanamatira kumisangano yekambani. Varidzi, mune izvo zviitiko, vakatarisana netarisiro yekuve nezvinhu zvavo pasi pekutongwa kwakashata kana dare rikaona kuti fomu remakambani rakaraswa kana kushandiswa zvisirizvo nevanozogovana navo, maofficial, nevatungamiriri. LLC nhengo dzinogona kupunzika padzidziso imwechete. Matare, dzimwe nguva, anoshandisa dzidziso imwechete kune maAdvs mune inogona kunzi "kuboora iyo chifukidziro cheV LLC". Pfungwa yedzidziso ndeyekuti hapana bhizinesi bhizinesi rinofanira kuvimba nekushandisa dzimba dzekuchengetedza zvemari kana chinzvimbo chemutero sechishandiso chekubiridzira kana kuenderera mberi nekukanganisa kune imwe nzvimbo yekunze kana agency. Kana bhizinesi bhizimusi richionekwa kunge rakashandiswa nenzira yakadaro, kana varidzi kana nhengo dzeSoftware dzakaratidzwa kuita senge zvinhu nemari yebhizinesi zvaichinjaniswa neyazvo (kubatanidza mari dzakadai. sekubhadhara chikwereti chemwenje chako nemari yekambani), ipapo vanogona kurasikirwa nedziviriro yeaseti inopihwa neyaimbove akapatsanurwa zviri pamutemo masangano ekurapa.
Kuboora chifukidziro che LLC kunoda kuti mumhan'ari aratidze kuti varidzi kana nhengo dzinoshandisa kutonga kwakazara kweI LLC zvine chekuita nekutengeserana kana mhosva; uye kuti kutonga kwakadai kwakashandiswa kuita chitsotsi kana kusaruramisira izvo zvakakonzera kukuvadzwa kune bato rekunze. Kuti uone kana LLC iri "inotongwa" nevaridzi vayo, matare anoongorora zvinhu zvinoverengeka, zvinosanganisira:
Iyo LLC haifanire kubatwa seakawedzeredzwa nhoroondo yevaridzi vayo kana nhengo. Matare nematare emitemo emitero anogara achiongorora mashandisirwo emari uye mashandiro eI LLC kuona kuti ibhizimusi rinoshanda here kana inzvimbo yakazvimiririra yemubhadharo yevaridzi vayo kana nhengo. Kana ichionekwa senzvimbo yakazvimiririra yemubhadharo, chifukidziro chinogona kuboorwa uye chavo chingave chirango chemitero nezvikwereti kumuridzi kana nhengo pachadzo.
Uchishandisa yako LLC seC Corporation
Kunyangwe isiri sarudzo yakajairika, kunyanya kana paine nhengo dzakawanda, imwe-nhengo LLC inogona kuvhiyiwa, uye kurapwa kurapwa mutero, seyakajairwa kana "C" mubatanidzwa. Kusarudza iyi nzira, zvakadaro, kucharamba kupasa-kuburikidza nemabhenefiti eiyo LLC uye nekudaro kunoregedza mazhinji ezvakanakira kuronga bhizinesi rako seI LLC. Bhizinesi rako rinozodikanwa kutevedzera maitiro emakambani, kuregedza iri nyore LLC chimiro, uye inogona kunge iri pasi pekuwongorora zvakanyanya semhedzisiro. Dzimwe nyika dzinoda kuti imwe-nhengo LLC ibatwe seC mubatanidzwa, asi handizvo zvazviri mumatunhu ese. Tsika nokungwarira paunenge uchisarudza kuti yako LLC ibatwe seC mubatanidzwa.
Nhengo dze LLC dzinogona kubata nenjodzi dzinosanganisirwa nekuona kuti vane chirongwa chakazara uye chakakodzera manejimendi munzvimbo yechisungo chakanyorwa uye chinotaura chibvumirano chekushanda. Ivo vanofanirwa kuona kuti bhizinesi remunhu pachezvake uye zvemari zvakachengetedzwa zvakaparadzana kubva kune iyo LLC, kuti zviwanikwa zvemunhu nemari zvichengetedzwe zvakasiyana kubva kune iyo LLC, uye kuti panogara paine capitalization yakakwana kuitira kuona mashandiro akanaka ebhizinesi.
Kushanda yako LLC uchitevedza yakakosha mirau yakadomwa pamusoro, uye kushandisa bhizinesi rakanaka uye njere, ichaona kuti yako LLC inoshanda uye inobatwa sezvayanga ichiitirwa.
Chibvumirano chekushanda kweiyo LLC chibvumirano pakati penhengo dzayo nezve bhizinesi reI LLC, kodzero nemabasa enhengo, uye chero hurongwa hwakasarudzika hunobvumiranwa pamberi pekupa. Chibvumirano chekushanda hachisi chinhu chakasimba chedunhu chero ripi zvaro, asi dzinoonekwa se "maitiro akanakisa" maitiro uye vanokurudzirwa zvakanyanya.
Chibvumirano chekushanda chinogona kufananidzwa kana kufananidzwa nemitemo yemubatanidzwa kana chibvumirano chekudyidzana muhukama hwakareruka - inoratidzira mirau, mirau, uye bhizinesi maitiro eV LLC uye inhengo, uye inogona kushandiswa kudarika zvisizvo mitemo yakatemerwa pane iyo LLC nedanho renyika LLC. Muenzaniso werudzi urwu rwekuwedzeredza ndewekuti imwe nhengo painopa chikamu chakakura chemari yekushandisa kune iyo LLC uye dzimwe nhengo dzinobvuma kuti nhengo iyi yaifanira kunge yakawedzera simba rekuvhota - izvi zvinogona kuenderana nemari yakadyarwa, kana chero nhamba iyo nhengo inobvumirana nezvayo, asi zvaizoitwa zviri pamutemo sechikamu chechibvumirano chekushanda.
Kana iyo LLC ikaumbwa seimwe-nhengo-nhengo LLC, chibvumirano chekushanda chiziviso nezvechimiro nesangano rakasarudzwa nenhengo kukambani yake, uye yakakosha kiyi mukuona kuti IRS ichabata sei iyo LLC nekuda kwemitero. .
Dzimwe nyaya dzakakosha dzinofanirwa kugadziriswa muchibvumirano chekushanda ndedzinotevera:
Mari yemari kana yefairo nenhengo
Muenzaniso weAccounting (kureva kuwedzera, mari kana mari yakagadziridzwa)
Rekodhi uye maminetsi ekuchengetedza
Kakawanda kwemisangano yenhengo
Kodzero dze manejimendi, mabasa, uye zvisungo
Zuva re LLC kuparara
Chero sarudzo dzakasarudzika, kodzero dzekuvhota, kana mashandiro ekuita uye zvinodiwa
Izvi zvinongova semhando yemhando yezvipo, zvisarudzo, uye nenyaya zvinofanirwa kugadziriswa muchibvumirano chekushanda, uye inova nzira yakanaka yekuita kusanganisa chero akakosha LLC mashandiro nemabasa muchibvumirano chekushanda.
Yakagadziridzwa Kuwedzeredzwa munaKurume 19, 2019